कुनै बेला काठमाडौ‌ंमा टिक्न नसकेर झापा फर्किएका थिए धुर्मुस | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
कुनै बेला काठमाडौ‌ंमा टिक्न नसकेर झापा फर्किएका थिए धुर्मुस
असोज ४, २०७५ बिहिबार १८:५०:३५ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाडौं – सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)को आज जन्मदिन परेको छ । लामो समयदेखि उनी कलाकरिता क्षेत्रमा लागिपरेका छन् ।
कलाकारिता क्षेत्रसँगै उनी २०७२ सालको भूकम्पपश्चात भने श्रीमती कुञ्जना समेतलाई साथमा लिएर समाजसेवामा लागेका छन् । यसका लागि उनले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको स्थापना नै गरेका छन् । र उनीहरुको विश्वसनीयताका आधारमै देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो योगदान दिँदै आएका छन् ।
सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)सोलुखुम्बु जिल्लाको तत्कालीन नेचा बेतघारी गा.वि.स.मा जन्मिएका हुन् । बुवा बोगराज कट्टेल र आमा कमला कट्टेलको जेठो छोरोका रुपमा वि.सं २०४० साल असोज ४ गते उनको जन्म भएको थियो । उनी ८ वर्षको छँदै उनको परिवार झापा झरेको थियो ।
माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन भने सीताराम कट्टेलले झापाको गौरादहमा पूरा गरेका थिए ।
निम्न आयस्तर भएको परिवारमा जन्मिएका उनले बाल्यकालदेखि नै आर्थिक अभाव भोगेर हुर्किएका थिए । कापीकलमको जोहो गर्नका लागि उनी कहिले हलो जोत्थे त कहिले अरुको स्केच चित्र बनाउँथे । खेतबारीको काम, घाँस दाउरा र घरायसी काम गर्दै अध्ययनलाई समेत अघि बढाएका उनी अध्ययनका क्षेत्रमा समेत कृयाशील भएर लाग्ने गर्थे ।
पढाईमा तेजिलो भएकै कारण पनि सीतारामले एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास गरेका थिए । उच्च शिक्षाका लागि भने उनी बुवाले ऋण गरेर जुटाएको १७ सय रुपैयाँ गोजीमा राखेर काठमाडौं आएका थिए ।
तर बुवाले ऋण खोजेर दिएको पैसा कोठा खोज्दा, र कोठाका निम्ति सामान जुटाउँदा नै सकियो । त्यसपछि उनले चित्र बनाउनेदेखि भाँडा बेच्ने कामसम्म गरेका थिए । यस्ता विभिन्न काम गरेर जम्मा गरेको पैसाले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा भर्ना भए । साथीहरुलाई जोक र क्यारिकेचर गरेर हँसाएको भरमा समेत थुप्रै छाक टारेका थिए उनले ।
उनी पत्रपत्रिका पढ्ने, टेलिभिजन हेर्ने भने गरिरहन्थे । उनलाई बेला बेलामा साथीहरुले कलाकार बन्न अभिप्रेरित गरिरहन्थे । साथीहरुले गरेको त्यो अनुरोध नै कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणाको श्रोत बन्यो त्यसैबीचमा केही समयपछि उनलाई कलाकार बन्ने भूत चढ्यो ।
त्यसपछि उनी हाँस्यकलाकार खेम शर्मासँगै बस्न थाले । खेम शर्मासँगै हिँड्न थालेपछि चिनजानसमेत बढ्दै गयो । तर, गतिलो अवसर भने पाउन सकेका थिएनन् । अन्त त उनी हार मान्दै झापा फर्किए ।
काठमाडौंदेखि हार मानेर झापा फर्किएका सीताराम झापामा अडिएर रहन भने सकेनन् । फेरि संघर्षसँग जुध्ने निर्णय गरी फेरि राजधानी नै फर्किएर आए । त्यसपछि फेरि संघर्ष गर्न थाले । त्यसको केही समयपछि भने उनले सन्तोष पन्तको टेलिचलचित्र ‘हिजो आजका कुरा’ मा छोटो संवाद बोल्ने मौका पाए ।
औपचारिक रुपमा भने हाँस्यकलाकार जितु नेपालले उनलाई कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गराए । गीताञ्जली टेलिचलचित्रमा अभिनय गर्ने मौका जुरेसँगै उनको भेट केदार घिमिरे (माग्ने बुढा) सँग हुन पुग्यो ।
त्यसपछि भने धुर्मुस र माग्ने बुढाको जोडीलाई दर्शकले राम्रैसँग रुचाउन थाले । गीताञ्जलीमा अभिनय गर्दागर्दै उनले दीपकराज गिरीसँगको चिनजानका कारण तितो सत्यको १४ भागसम्म अभिनय गर्ने अवसर प्राप्त गरे । पछि केदार घिमीरेसँगको सहकार्यमा मेरी बास्यै हाँस्य टेलिश्रृंखला निर्माण गर्न सुरु गरे ।
मेरी बास्सैमा सीतारामले अभिनय गरेको धुर्मुस पात्रले निकै चर्चा कमाउन सफल भयो । र सीतारामलाई दर्शकले बिर्सिदिए तर उनै सीतारामको धुर्मुस क्यारेक्टर भाने सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भयो ।
मेरी बास्सैमा उनले धुर्मुसको मात्र नभएर खडानन्द, नक्कली केपी ओली,खड्काजी, मुस्कान पासा, आइतेलगायत धेरै भूमिको निर्वाह गरेका थिए । एउटै टेलिश्रृङ्खलामा सबैभन्दा धेरै भूमिकामा देखिएका कलाकार हुन् सीताराम कट्टेल ।
मेरी बास्सै निर्माण तथा अभिनयकै क्रममा उनले धुर्मुसको जोडीको रुपमा देखिएकी कुञ्जना घिमिरे(सुन्तली)सँग विवाह गरे । अहिले उनीहरुको एक छोरी समेत रहेकी छिन् । छ एकान छ, वडा नम्बर ६ लगायतमा सफल चलचित्रहरुमा समेत उनले अभिनय गर्नुका साथै लगानी समेत गरेका थिए ।
वैशाख १२ को गोरखा भूकम्पपश्चात धुर्मुस सुन्तलीको जोडी सामाजिक काममा अत्यन्तै सक्रिय भएर लागि परेका छन् । भूकम्पपश्चात यो जोडीको सक्रियतामा काभ्रे, महोत्तरीलगायतका स्थानहरुमा एकीकृत बस्तीको समेत निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् । धुर्मु सुन्तली एकीकृत नमुना बस्ती नाम दिइएको उक्त बस्तीले धेरैबाट प्रशंसा पाउनुको साथै धेरैबाट आर्थिक सहयोग समेत जुटेको छ ।
यस्तै, भूकम्प प्रभावितलाई कपडा बाँड्नुका साथै महोत्तरीको बर्दिबासमा रहेको मुसहर बस्तीमा राहत बाँडेका थिए ।
यो सामाजिक कामलाई अझै सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउन उनीहरुले वि.सं २०७२ सालमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन स्थापना गरेका थिए । त्यही फाउण्डेशनमा देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले खुलेर आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । भर्खरै काठमाडौंको वीर अस्पतालको रङरोगन गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
अहिले भने उनी क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्नका निम्ति अग्रसर भएर लागि परेका छन् । अबको केही समयपश्चात धुर्मुस चलचित्र निर्माणमा समेत लाग्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०७५
यि कलाकारलाई अपार सफलता मिलाेस्।शुभकामना !!!
अमिताभ, शाहरुखलगायतले र्इशा अम्बानीको विवाहमा खाना पस्किनुकाे रहस्य यस्ताे पाे रहेछ !
जान्ह्वी कपूरलाई सारा अली खानले दिइन् मात
सुवासको हत्या भएको भन्दै परिवारले शव बुझेनन्
पुस ३, २०७५ मंगलबार
कांग्रेसले धोका दिएकाले चुनावमा राप्रपा हार्‍याे : अध्यक्ष थापा
आइपीएल अक्शन: अनक्याप्ड वरुण चक्रवर्तीले ८ कराेडमाथि पाउँदा यु...
‘सीएमसीले हात झिकेकै अवस्थामा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको...
संस्कृत श्लोक कण्ठ गर्न नसकेको भन्दै बालकमाथि कुटपिट, बालकको ख...
अन्तरप्रदेश परिषदको दोस्रो बैठकले अनुमाेदन गर्याे अन्तर प्रदेश ...
सर्लाहीका हात्ती पीडितले राहत पाएनन्
पूर्वप्रेमी रणबिर कपूर रिसेप्सनमा नआउनुको कारणबारे दीपिकाले ...
कतार एयरवेजकाे मिडिया राउन्डटेबल
भगिमानसिंह स्मृति फुटबलमा इलाम र पाँचथर विजयी
नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक लम्बिने
वैदेशिक रोजगारी : नीति र निर्णय विश्वकै उत्कृष्ट, कार्यान्वयन क...
बाजेको पसलमा कति मीठो खीर ! (भिडियो)
आप्रवासन दिवस : वैदेशिक रोजगारीले भित्रिएको मानसिक समस्यामा ...